गोंगबुबाट सेनाका हवल्दार सहित चार जना पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/गोंगबुबाट सेनाका हवल्दार सहित चार जना पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ !
काठमाडौं । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । एक जना सर्वसाधारण पनि पक्राउ परेका छन् । चार थान रेडपाण्डाको छाला सहित दुईजना प्रहरी कार्यालय सहयोगी र एकजना सेनाका हवल्दारलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौँको गोङ्गबुबाट रेड पाण्डाको छाला बेच्दै लागेको अवस्थामा ४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा सेनाका हवल्दार निरबहादुर घले, प्रहरीका कार्यालय सहयोगी (प्रकाश) मोहन कर्ण कार्की, कृष्ण तामाङ र सर्वसाधारण सुरेश गिरी छन् ।
अपराध महाशाखाका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले चार जना पक्राउ परेको पुष्टि गरेपनि संगठनमा संलग्नताबारे पुष्टि भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘दुई जना प्रहरी कर्मचारी भएको खुलिसकेको छ, सेनाको हकमा पुष्टि भइसकेको छैन ।’
अनुसन्धानमा सं लग्न एक अधिकृतका अनुसार सैनिक कर्मचारी भएको पुष्टि भए अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया जंगीअड्डाले नै अघि बढाउँछ । ‘सैनिक अदालत छल्न पनि पक्राउ पर्ने सेनाका कर्मचारीले आफू सैनिक भएको बताउँदैनन्’ उनी भन्छन्, ‘जंगीअड्डासँग पनि समन्वय गर्छौं र सैनिक भएको पुष्टि भए उतै बुझाउँछौं ।’
उनीहरुको साथबाट दुलर्भ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको चार वटा छाला बरामद भएको खापुङले बताए । प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।